चिकित्सक सुरक्षा माग्दै धनगढीमा | नेपाली पब्लिक चिकित्सक सुरक्षा माग्दै धनगढीमा | नेपाली पब्लिक
नेपाली पब्लिक २०७६, ३० असार सोमबार १६:३३
धनगढी – डडेल्धुरा उपक्षेत्रीय अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरू काममा फर्कने वा नफर्कने भन्ने अन्योलमा छन् । शुक्रबारदेखि अस्पतालका गाइनोलोजिस्ट विशेषज्ञ डा. नवराज जोशीको नेतृत्वमा १० जना चिकित्सक डडेल्धुरामा असुरक्षा बढेको भन्दै काम छोडेर धनगढी आएका थिए।
चिकित्सकमाथि हातपात गर्ने कार्यमा संलग्न एक जना पक्राउ परेको र अन्यको खोजी कार्य भइरहेको भन्ने सुनेको छु,’ डाक्टर जोशीले भने, ‘साँच्चै पक्राउ परेको हो भने हामी पुनः काममा फर्कन्छौँ। पक्राउका विषयमा अस्पताल प्रशासन तथा प्रहरीसँग बुझिरहेका छौं।’
यसअघि आइतबार नै धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर चिकित्सकहरूले सुरक्षाको प्रत्याभूति भएपछि मात्र काममा जाने बताएका थिए। उनीहरूले डडेल्धुरामा आफूहरूलाई काम गर्ने वातावरण नभएको गुनासो गरेका थिए। ‘अस्पतालमा पटक–पटक बिनाकारण चिकित्सकमाथि आक्रमण हुन थाल्यो’, डा. जोशीले भने, ‘कसरी काममा फर्किने ?’
असार २५ गते शव पोस्टमार्टमको विषयलाई लिएर चिकित्समाथि आक्रमण भएको थियो। अमरगढी नगरपालिका–११ का वडाध्यक्ष सूर्यप्रकाश खड्काको नेतृत्वमा आएको भीडले शव परीक्षण गरिरहेका चिकित्सकमाथि आक्रमण गरेको अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकको आरोप छ। ‘बिरामीको उपचार गर्दा पनि चिकित्सकमाथि आक्रमण हुन्छ। मरेको मान्छेको पोष्टमार्टम गर्दा पनि चिकित्सकमाथि आक्रमण हुन लाग्यो,’ डा. जोशीले भने। ‘प्रहरीको रिपोर्ट आएपछि चिकित्सकहरूले पोस्टमार्टम गर्ने हो’, उनले भने, ‘पोस्टमार्टम गर्ने क्रममा बाहिरबाट हुलदंगा गरेर भित्र आए। त्यसपछि पोस्टमार्टमा संलग्न चिकित्सक काम छोडेर बाहिरतिर लागेका हुन्।’
आक्रमण गर्नेलाई कारवाही नहुञ्जेल नियमित काममा नफर्कने पोस्टमार्टमा संलग्न डा. दिनेश उपाध्यायले बताए। असार २५ गते चिकित्सकमाथि आक्रमण भए पनि आक्रमण गर्नेमाथि कारबाहीको माग गर्दासमेत कतैबाट सुनुवाइ नभएको उनले बताए। चिकित्सकमाथि बिनाकारण हुने आक्रमणले काम गर्ने वातावरण नै नरहेको उनले बताए।
त्यस्तै, नेपाल चिकित्सक संघ सुदूरपश्चिम संयोजक प्रमोद जोशीले कार्यकक्षमै चिकित्सकमाथि आक्रमण हुँदा स्थानीय प्रशासनले कुनै पनि कदम नचाल्नु आपत्तिजनक भएको बताए। चार दिन बितिसक्दा पनि चिकित्सकलाई आक्रमण गर्नेलाई पक्राउ गरी कारकावाही नगरिएको भन्दै उनले दोषीलाई २४ घण्टाभित्र कानूनी दायराभित्र नल्याए आन्दोलनमा जान बाध्य हुने बताए।
नेपाल नर्सिङ संघ सुदूरपश्चिम अध्यक्ष यशोदा ढकालले चिकित्सकमाथि हुने आक्रमण तत्काल रोक्नुपर्ने बताइन्। चिकित्सक उपचारकै लागि बसेको भए पनि केही समस्याका कारण कुनै बिरामीलाई बचाउन नसक्नु चिकित्सककै दोष नभएको उनी बताउँछिन्। चिकित्सकले आफ्नो तर्फबाट हुने पूर्ण पहल गरिरहे पनि चिकित्सक नै दोषी बन्ने गरेको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरिन्। यस्ता घटना दोहोरिन्छन भने चिकित्सकहरू सुरक्षित ठाउँमा मात्रै जान बाध्य हुने उनको भनाइ छ।
चिकित्सकहरूको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री भट्टले चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्ने दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रदेश सरकारले पहल गरिरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। उनले भने, ‘तपाईंहरू ढुक्कसँग काममा फर्कनुहोस्। आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन दिइने छैन।’
उपक्षेत्रीय अस्पतालमा मेडिकल सुरपरिटेण्डेण्ट जितेन्द्र कँडेलबाहेक अन्य चिकित्सकहरू अस्पताल छोडेर धनगढी आउँदा सेवा प्रभावित भएको छ। अस्पतालमा उपचार सेवा बन्द हुँदा विरामीहरूलाई सास्ती भएको छ। चिकित्सकहरू धनगढी आएपछि अस्पतालमा उपचार सेवा बन्द हुँदा बिरामीहरूलाई सास्ती भएको छ। डडेल्धुरामा उपचार बन्द भएपछि धनगढीका अस्पतालमा भने विरामीको चाप बढेको छ।
चिकित्सकमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ
डडेलधुरा अस्पतालमा ड्युटीमा खटिएका चिकित्सकमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले चिकित्सकहरूको उजुरीका आधारमा शंकास्पद एक जनालाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको हो। नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिका विषयमा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेकाले उनको परिचय भने गोप्य राखिएको छ।
गत बुधबार दिउँसो शव परीक्षण गरिरहेका चिकित्सकलाई ढिलो गरेको भन्दै हातपात गरिएको थियो। आक्रमणपछि चिकित्सकहरूले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सुरक्षाको कारण देखाउँदै दोषीमाथि कारबाही नहुँदासम्म नियमित सेवामा फर्कन नसक्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी गराएर बुधबारबाट आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गरेका छन्।
अलग–अलग व्याख्याले मुलुकमा अन्योल :…